एसेन्सी । रसियाका १० वर्षीय बालकले १३ वर्षीया बालिकालाई गर्भवती बनाएको समाचार प्रकाशित भएको छ । कम उमेरमा नै बालकले परिपक्व शुक्रकिट निकाल्न नसक्ने भन्ने अनुसन्धानहरुले बताइरहेको बेला यो समाचार प्रकाशित भएको हो । यो समाचारले मेडिकल क्षेत्रमा एउटा तरंग नै पैदा गरेको छ ।
तरंगपछि अभिभावकहरुको अनुमती मा नै उक्त बालक तथा बालिकाको अनुहार एक रुसी टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रशारण हुने कार्यक्रममा देखाइएको थियो । कार्यक्रममा बालक इभान (वान्य) तथा बालिका दर्या (दाशा) प्रस्तुत भएका थिए । कार्यक्रममा प्रस्तोताले बालकले नभई उनको बुबाले बालिकालाई गर्भवती बनाएको हुनसक्ने कुरा उठाएका थिए ।
कार्यक्रममै प्रस्तुत भएका यूरोलोजी तथा एन्ड्रोलोजी विशेषज्ञ डा. एभगेनी ग्रिकोभले इभावले गर्भ बोकाएको कुरामा इन्कार गरेका छन् । यसबारेमा विशेषज्ञ डा. ग्रिकोभले भने ‘हामीले प्रयोगशालामा तीन पटक नमुनाको परिक्षण गर्यौं । यसले गल्ती देखाएको छैन ।’ उनले थपे ‘त्यहाँ शुक्राणु कोषहरु हुन सक्दैन । उ अहिले पनि बच्चा नै हो । उनको शरीरमा कुनै टेस्टोस्टेरोन छैन । उनको यौवन शुरु भएको छैन । त्यसकारण हामीसँग धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरु छन् ।’
बालक तथा उनका बाबुआमाले भने बालकको मेडिकल परिक्षण गर्न सहमति दिएका थिए ।
उक्त टेलिभिजले बालक तथा बालिकाको गोपनियता भंग गरेको भन्दै त्यसको समेत विरोध भएको छ ।
कम उमेरमा नै गर्भ बोकाएको भन्ने बारेमा अनेक खालका टिप्पणी भइरहेको बेला रसियाकै अर्को टेलिभिजन 'रोसिया १' ले बालिकाको छिमेकीसँग अन्तर्वार्ता लिँदा बालिकाको अर्को केटा रहेको बताएका छन् । ४० वर्षीय छिमेकी पुरुषले भनेका छन् ‘पक्कै पनि त्यो अरु कसैले गरेको हो । उनीहरु केटालाई नै आरोप लगाइरहेका छन् ।’
उक्त बालिकाले अरु कसैको गर्भ बोकेको हुनसक्ने भने पनि बालिकाले भने सोही बालकसँग मात्र शारिरिक सम्पर्क गरेको दावी गरेकी छिन् । धेरैले बालकले पेट बोकाउन नसक्ने भनिरहेको बेला बालिकाले सबैको कुरालाई खण्डन गर्दै भनेकी छिन् ‘त्यो वान्यको प्रस्ताव (यौन सम्पर्क) थियो र मैले यो कुरालाई इन्कार गरिन ।’
‘उनले ढोका बन्द गरेर साँचो लक गर्यो । जसको कारण उनको आमाले खोल्न नसकोस् । मलाई केही डर लागिरहेको थियो, निकै पीडादायी क्षण पनि । यो केही लाजमर्दो कुरा पनि हो, हामी ब्ल्याङ्केटभित्र लुकेका थियौं । मलाई १० वर्षका उनीसँग यस्तो क्षमता छ भन्ने थाहा थिएन । मलाई केही हुँदैनजस्तो लागेको थियो ।’
टेलिभिजनका अनुसार फरक विद्यालयमा पढ्ने यी बालक तथा बालिकाले गत फेब्रुअरीबाट डेटिङ शुरु गरेको थिए ।
घटनाको बारेमा रुसी अनुसन्धान समितिले प्रारम्भिक जाँच शुरु गरेपछि यो कार्यक्रम प्रशारण भएको थियो ।